အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေးဌာန - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
နေ့စဉ် (တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်) - ၀၇:၀၀-၂၂:၀၀
၆၆ (၀) ၂၇၁၁-၈၅၅၅-၆
Bangkok မြို့ရဲ့ Samitivej ဆေးရုံကြီးဟာ အရည်အသွေးမြင့် အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးတဲ့နေရာမှာ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေးဌာနမှာရှိတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ၊ ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာတွေ အားလုံးကို အမြင့်မားဆုံး နိုင်ငံတကာအဆင့်ရောက်အောင် စီမံထားပါတယ်။
Samitivej ဆေးရုံကြီးဟာ သားဖွား/မီးယပ် ဝန်ဆောင်မှုတွေကနေ စိတ်ကြိုက်မွေးဖွားဖို့ အစီအစဉ်တွေကို ဆွေးနွေးအကြံပေးဖို့အထိ အဓိကကျတဲ့ အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေအားလုံးကို ကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်း အပြည့်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Bangkok မိခင်စောင့်ရှောက်ရေးဌာနဟာ မိခင်နဲ့ကလေး တစ်ယောက်ချင်းစီအတွက် ခွဲမွေးတာနဲ့ ရိုးရိုးမွေးတာ ဘယ်ဟာ အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်တာအပါအဝင် ကိုယ်ဝန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘက်ပေါင်းစုံ ထောင့်စေ့အောင် ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ရိုးရိုးမွေးဖွားခြင်းတွေအတွက် ရေနွေးကန်အတွင်းမွေးဖွားမှု အပါအဝင် အထူးမွေးဖွားဖို့ ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုတောင် စီစဉ်ထားရှိပါတယ်။
Samitivej ဆေးရုံကြီးမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူနာတွေ အားလုံးအတွက် အကောင်းဆုံးနဲ့ ခေတ်အမီဆုံး ဆေးပညာအချက်အလက်၊ ဆေးဝါးကုသမှုနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ ဆောင်ကြဉ်းပေးဖို့ကို ကျွန်တော်တို့ အာမခံပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဌာနဟာ သားသမီးမထွန်းကားနိုင်ခြင်းအတွက် ကုသမှုများသာမက စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် ဆီးဝမ်းမထိန်းနိုင်ခြင်း (stress incontinence) နဲ့ ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါများနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခက်အခဲတွေအပါအဝင် အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘက်ပေါင်းစုံအောင် ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ အပျိုဖေါ်ဝင်ချိန်မှ အစပြု၍ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်အလယ် သွေးဆုံးချိန်အဆုံး အမျိုးသမီးများရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ရိုသေလေးစားမှုအပြည့် စဉ်းစားဆင်ခြင်မှု အပြည့်အဝဖြင့် ကုသပေးနေပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး အထူးလိုအပ်ချက်တွေ၊ မွေးဖွားဖို့ အစီအစဉ်တွေနဲ့ ဘက်စုံကျန်းမာဖို့အတွက်ကို ကရုဏာတရား၊ ဆေးပညာကျွမ်းကျင်မှုအပါအ၀င် နားလည်သဘောပေါက်မှုတို့နဲ့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာ သူတို့ရဲ့ စောင့်ရှောက်မှုအဆင့်ကို အမြင့်ဆုံးပေးမှာဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို ကူညီတဲ့အလုပ်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာသော အတွေ့အကြုံတွေ၊ ဗဟုသုတတွေနဲ့ စောင့်ရှောက်မှုတွေ ပေါင်းထည့်ပေးထားကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ UNICEF-သတ်မှတ်ပေးထားသည့် ကလေးငယ်များအတွက် သင့်လျှော်သောဆေးရုံကြီး ဆိုတဲ့ မှတ်တမ်းအတွက် အထူးပဲ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ တစ်ခြားနိုင်ငံများစွာက ထောင်ပေါင်းများစွာသော လူနာတွေဟာ Bangkok မြို့ရဲ့ Samitivej ဆေးရုံကြီးကို သူတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအဖြစ် ရွေးချယ်ထားကြပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အတွက် အတန်းများ
သားသမီးမထွန်းနိုင်ခြင်းနှင့် မျိုးပွားမှုစနစ် အထောက်အကူပြုနည်းပညာ
ဗိုက်ကိုဖေါက်ပြီး မှန်ပြောင်းထည့်၍ ခွဲစိတ်ခြင်း
ခွဲစိတ်ဖြတ်တောက်မှု အနည်းဆုံး ခွဲစိတ်ကုသမှု
တင်ပါးဆုံးရိုး အတွင်းကြွက်သား ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း
စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် ဆီးဝမ်းမထိန်းနိုင်ခြင်း (stress incontinence)
ဆီးမထိန်းနိုင်သည့်ရောဂါကို ခွဲစိတ်ကုသခြင်း (TASS)
ဆီးမထိန်းနိုင်သည့်ရောဂါ (overactive bladder) ကို ကုသခြင်း
ရိုးရိုးမွေးခြင်းအတွက် အထူးရေချိုးကန် မီးဖွားခန်းများ
သန္ဓေသားလောင်း ပြောင်းထည့်ပေးခြင်း (ဆေးရုံတက်ရန်မလိုသော ခွဲစိတ်မှု)
သားဥထုတ်ယူခြင်း (ဆေးရုံတက်ရန်မလိုသော ခွဲစိတ်မှု)
နေ့စဉ် (တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်) - မနက် ၀၈.၀၀ - ညနေ ၁၇.၀၀
၆၆ (၀) ၂၃၇၈-၉၁၂၉-၃၀
နေ့စဉ် (တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်) - မနက် ၀၈:၀၀ - ည ၂၀:၀၀
၆၆ (၀) ၃၈၃၂-၀၃၀၀ လိုင်းခွဲ ၄၂၀၀ - ၁
၆၆ (၀) ၂၄၃၈-၉၀၀၀ လိုင်းခွဲ ၃၃၀၀
Chartchai Rattanamahattana, M.D.
Suneerat Kongsayreepong, M.D.
Jennattaya Palangsaenwilai, M.D.
Patcharaporn Phonpornpaiboon, M.D.